Ukuthola Ukucwengisiswa Kuphela Okungenza Umuntu Abe Nothando Lweqiniso | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Ekuphileni kwakhe, uPetru wabhekana nokucwengwa izikhathi ezingamakhulu futhi wabhekana nezinhlupheko eziningi ezibuhlungu. Lokhu kucwengwa kwaba yisisekelo sothando lwakhe olukhulukazi lukaNkulunkulu, futhi lokhu kwaba yinto ebalulekile empilweni yakhe yonke. Ukuthi wakwazi ukuba nalolu thando olukhulukazi lukaNkulunkulu empeleni, kolunye uhlangothi, kwaba ngenxa yokuphikelela kwakhe ethanda uNkulunkulu; okubaluleke kakhulu, kodwa-ke, kwaba ngenxa yokucwenga nokuhlupheka abhekana nakho. Lokhu kuhlupheka kwaba yisiqondiso saKhe endleleni yokuthanda uNkulunkulu, futhi kwaba yinto angazange ayikhohlwa. Uma abantu bengahlangabezani nobuhlungu bokucwengwa uma bethanda uNkulunkulu, lokho-ke kusho ukuthi uthando lwabo lugcwele ukungcola kanye nokuthandwa yibo; uthando olufana nalolu lugcwele imibono kaSathane, futhi nje alukwazi neze ukufeza intando kaNkulunkulu. Ukuba nothando oluphikelelayo lukaNkulunkulu akufani nokuthanda uNkulunkulu ngokweqiniso. Yize noma konke abakucabangayo ezinhliziyweni zabo kungenxa yokuthanda uNkulunkulu, nokwenelisa uNkulunkulu, sengathi imicabango yabo ayinamicabango yabantu, sengathi konke abakwenzayo bakwenzela uNkulunkulu, uma imicabango yabo ilethwa phambi kukaNkulunkulu, imicabango enjalo ayinconywa noma ayibusiswanga nguNkulunkulu. Ngisho noma abantu sebeqondisise kahle wonke amaqiniso—uma sebewazi wonke—lokhu akukwazi ukubizwa ngophawu lokuthanda uNkulunkulu, angeke kuthiwe laba bantu ngempela bathanda uNkulunkulu. Ngisho noma sebeqondisise amaqiniso amaningi ngaphandle kokubhekana nokucwengwa, abantu abakwazi ukuphila ngala maqiniso; kungesikhathi sokucwengwa kuphela lapho abantu bengaqonda okushiwo ngempela yilawa maqiniso, yilapho kuphela lapho abantu bengakwazi ukwazisa ngempela incazelo yawo yangaphakathi. Ngaleso sikhathi, uma sebezama futhi, bayakwazi ukusebenzisa la maqiniso ngendlela, kanye nangokuhambisana nentando kaNkulunkulu; ngaleso sikhathi, imibono yabo yabantu iyancipha, ukukhohlakala kobuntu babo kuyehla, kanti nemizwa yabo yokuba umuntu iyashabalala; kungaleso sikhathi kuphela lapho ukwenza kwabo kuyisibonakaliso seqiniso sothando lukaNkulunkulu. Umphumela weqiniso lothando lukaNkulunkulu awufezeki ngolwazi olukhulunywayo noma ukuzimisela ngokwengqondo, futhi awufezeki nje kalula ngokuqondwa. Uma kudingeka abantu bakhokhe inani elithile, nokuthi babhekane nomunyu omkhulu kakhulu ngesikhathi sokucwengwa, bese kuba yilapho kuphela-ke lapho uthando lwabo luba msulwa, futhi lube ngolulangazelele inhliziyo kaNkulunkulu uqobo. Emfunekweni Yakhe yokuba umuntu athande Yena, uNkulunkulu akaphoqi ukuthi umuntu amthande ngothando lwemizwa noma noma intando yakhe; kodwa kungokuthembeka kanye nokusebenzisa iqiniso lapho umuntu engakwazi ukumthanda Yena kanye nokumkhonza. Kodwa umuntu uphila phakathi kwenkohlakalo, ngakho-ke akakwazi ukusebenzisa iqiniso nokwethembeka ukuze amsebenzele uNkulunkulu. Kuphakathi kokuthi unomdlandla onamandla kakhulu noma uphole kakhulu futhi akanandaba noNkulunkulu, kuphakathi kokuthi uthanda uNkulunkulu ngokwedlulele noma umenyanya ngokwedlulele. Labo abaphila phakathi kwenkohlakalo bahlale bephila phakathi kwalezo zimo ezimbili eziphikisanayo, bahlale bephila ngokwentando yabo kodwa bekholwa ukuthi benza kahle. Yize noma lokhu ngikhuluma ngako njalonjalo, abantu abakwazi ukukuthathela phezulu, abakwazi ukukuqonda ngokuphelele ukubaluleka kwakho, ngakho-ke baphila phakathi kwesimo sokholo lokuzikhohlisa, othandweni lukaNkulunkulu lwenkohliso oluthembele entandweni yabo. Emlandweni wonke, njengoba isintu sithuthuka neminyaka idlula, okufunwa nguNkulunkulu kumuntu sekuphakeme kakhulu, futhi usefune ukuthi umuntu aqiniseke ngokuphelele kuYe. Kodwa noma kunjalo ulwazi lomuntu ngoNkulunkulu luya ngokuya lungaqondakali futhi lungabi yinto ongokoqobo, futhi uthando lwakhe ngoNkulunkulu luya ngokuya luntengantenga futhi olungenabo ubumsulwa. Isimo somuntu nakho konke akwenzayo kuya ngokuya kuphambana nentando kaNkulunkulu, ngoba umuntu usengene shi ekungcolisweni nguSathane. Lokhu kudinga ukuthi uNkulunkulu enze okwengeziwe, nakakhudlwana, umsebenzi wosindiso. Umuntu ulokhu efuna njalonjalo kuNkulunkulu, kodwa uthando lwakhe ngoNkulunkulu luyehla njalonjalo. Abantu baphila impilo yokungalaleli, abanalo iqiniso, futhi baphila izimpilo ezingenabo ubuntu; abagcini nje ngokuphelelwa uthando ngoNkulunkulu, kodwa bagcwele ukungalaleli kanye nokuqagulisana. Yize noma becabanga ukuthi banothando oluphuphumayo ngoNkulunkulu, futhi akukho okunye okudlula lokhu abangamenzela kona Yena, uNkulunkulu akaboni kanjalo. Kucace bha kuYena ukuthi uthando lomuntu ngaye lungcole kangakanani, kodwa akakaze ashintshe imicabango yaKhe ngomuntu ngenxa yobuphixiphixi bakhe, futhi akakaze aphindisele izenzo zomuntu ngenxa yokuzinikela kwakhe. UNkulunkulu akafani nomuntu, uyakwazi ukwahlukanisa: Uyazi ukuthi ubani omthanda ngokweqiniso kanye nalabo abangamthandi, futhi kunokuba acindezelwe yimizwa nokungakwazi ukuzilawula ngenxa yokuthatheka komuntu kwesikhashana, uphatha umuntu ngokomongo nokuziphatha kwakhe. UNkulunkulu, phela, unguNkulunkulu, futhi unesithunzi saKhe; umuntu, phela-ke, ungumuntu, kanti ikhanda likaNkulunkulu ngeke liguqulwe uthando lomuntu oluphikisana neqiniso. Kunalokho, uphatha konke lokho okwenziwa umuntu ngokufanelekile.